Abathengisi beeflethi zemigangatho yokufa beflethi ngamaxabiso afakiwe
imayile yokufa ethe tyaba yefafa incinci ngokobukhulu, uyilo kunye nolwakhiwo lokwenza iipellets zokutya kunye neepellethi zokhuni. Yamandla ombane ipellet mill nge 200 mm ubukhulu kufa, Imingxunya yokufa inokuba ntle kakhulu nangawuphi na ubungakanani obungathanda. Ungazisebenzisa ukuqhubekeka nenkunkuma eyahlukeneyo yezolimo kunye nehlathi, njengokucoceka kwenkuni, umgubo wombona, umququ, irayisi husk, igobolondo kernel kunye nezinye izinto ezilahliweyo kwiipellets. Ingxolo ephantsi, ukusebenza okuphezulu kunye nokuguquguquka okuphezulu, Lo matshini ngowakho umatshini ofanelekileyo we-pelletizing.Flat die yinxalenye ebaluleke kakhulu yomthi wokufa we-pellet wokufa kwisityalo esincinci somvelisi. Imayile yeflat die pellet ixhomekeke kwilifa elisicaba ukuze kuveliswe iipellets ezivela kwizinto ezahlukeneyo eziluhlaza. Izinto eziluhlaza ezahlukeneyo zinobunzima obahlukeneyo kunye neendidi ezahlukeneyo zepellets kufuneka zibengobunzima obahlukeneyo ngokwemisebenzi yabo. Umzekelo, ii-pellets zokondla izilwanyana akukho bunzima njengezitshisi zeoyile. Ke ngoko iintlobo ezahlukeneyo zeepellets kunye nezinto ezahlukeneyo eziluhlaza zokwenza i-pellets zifuna ukubumba okungafaniyo kufile. Ngaphezulu komgangatho wokucinezelwa, Idenser ipellets ezivelisiweyo. Nangona kunjalo umlinganiselo wokucinezelwa uphezulu kakhulu, Isixhobo singakuthintela ukufa. Oko kukuthi, ukuba ufuna ukwenza i-pellets ekumgangatho ophezulu, Kuya kufuneka ukuba usebenzise iflethi efanelekileyo yokufa ngeyona ndlela yokucinezelwa efanelekileyo ngokwento yakho ekrwada.
Iimpawu zeFlat die Pellet Mill
1. Imitha yokufakelwa kombane kwiflethi yombane iqhutywa ngumbane ombane owenza ukuba ukonga amandla ngakumbi nokusingqongileyo.
2. Ukufa okuqengqeleka kunye nokufa kuflatwe kwenziwa kwizinto ezichanekileyo zesinyithi ze-alloy ezenza ukuba le nxalenye ingadibaniyo kwaye kungabi lula ukwahlukana nayo., Ngaphandle koko, omabini amacala anokusebenzisa iflethi yokufa, Ngale ndlela ke ubomi obude benkonzo.
3. Umatshini we-Pellet wamkela ezimbini okanye ezintathu zeeroli ,ukusebenza okuphezulu, ubungakanani bepellet efanayo.
4. Ukudibanisa ngokukhawuleza uhlobo lwe-clamp yokufa echanekileyo-eyamkelweyo yamkelwe ukunxibelelanisa i-die kunye ne-quill flange, ukwazi ukutshintsha ukufa okusha kunye nabaqengqelezi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ngokweemfuno zakho.
5. Ukubonakala. Kuyenzeka ukuba ujonge kwigumbi xa uphela, ukuze ukwazi ukusombulula ingxaki ngexesha.
6. Ubungakanani obuncinci & isisindo esenza ukuba isetyenziswe ngokubanzi ekhaya, kwifama encinci.
7. Kukulungele ukufumana izinto ezingafunekiyo, njengamatye enkuni, Chips zokhuni, igobolondo, ingca yengqolowa, umqhaphu, irhasi, isebe, irayisi husk, Isiqu sejongilanga, igobolondo le-kernel yesundu kunye nezinye izinto ezininzi.
8. Kufanelekile ukwenza zombini iipellets zokutyisa kunye neepellethi zokhuni.
Izinto ezingafunekiyo zefail yephillili yokufa:
Iichipsi zeenkuni, sawunust, Isiqu sombona, igobolondo yamantongomane, ingca yerayisi, ingca yengqolowa, Amanzi enkunkuma, ibhegi, ingca, alfalfa, tshintsha ingca, irayisi husk, iikeyiki zeoyile, njl.